December | 2021 | Radio Himilo
Nin lagu xukumay in uusan Israel ka bixi karin ku dhawaad 8000 sano
Ahmed Haaddi 26 days ago
Himilo – 44-jirka lagu magacaabo Noam Huppert, tan iyo sanadkii 2013, waxa laga mamnuucay in uu ka dhaqaaqo Israel inta laga gaarayo sannadka 9999-ka, markii lagu eedeeyay in uusan bixin qarashkii la siin lahaa carruurtiisa. Sanadkii 2013, Huppert waxaa lagu ...
Waa kuwee goolashii ugu dhaqsiyaha badnaa Premier League oo ay dhaliyeen ciyaaryahano keydka ka soo kacay?
Himilo – 2007-dii Arsenal waxay u baahnayd wax – ama laga yaabee, qof – gaar ah. Tusaale ahaan Nicklas Bendtner. Barbaro 1-1 ah oo ay ahayd 10 daqiiqana ka hadhsan tahay ciyaartii north London derby oo ay la ciyaareen kooxda ...
Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 116aad
Lionel Messi oo wali heysta rikoor cajiib ah oo Barcelona ah inkasta oo uu ka tagay bishii August
Ahmed Haaddi 27 days ago
Himilo – Lionel Messi ayaa weli ah gooldhaliyaha Barcelona ee sanadka 2021, inkastoo uu xagaagii u dhaqaaqay PSG. Messi qandaraaskiisu waxa uu dhacay bishii June, inkastoo Barca ay isku dayday inay sii haysato adeegiisa, dhaqaala xumada ayaa keentay in xiddiga ...
Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 115aad
Wiil qaxooti ah oo xiddig ka noqday baraha xiriirka Bulshada
Himilo – Camar Maskoun, waxa uu 13 sano oo ka mid ah noloshiisa ku qaatay magaaladii uu ku dhashay ee Xalab oo xuddun u ahayd dagaal toban sano jirsatay oo ay ku dhinteen ku dhawaad nus milyanka ruux. Inkasto oo ...
Ahmed Haaddi 28 days ago
Maxaad ka ogtahay 10 ciyaaryahan oo kubadda cagta ah oo isku dayay ciyaaro kale sida xeegada barafka ilaa WWE
Himilo – Marka ciyaartoyda kubbadda cagta ay ka fariistaan ciyaaraha, qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tabayaan waa guuxa tartanka iyo qolka lebbiska. Xiddigaha qaar ayaa qaatay ciyaaro kale markii kabaha kubada cagta ay bixiyaan. Kabtanka England ...
Macluumaad ku saabsan dalalka ugu dhulka yar Africa
Himilo – Qaarada labaad ee adduunka ugu weyn, Africa, waxay ka kooban tahay 54 dal oo xor ah. Qaaraddu waxay ku fadhisaa 20.4% marka laga qiyaas qaado cabbirka dhulka. Badda atlantic-ga ayaa qaarada ka marta dhanka galbeed halka dhan waqooyi ...
Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 114aad